गणेश कुमार शर्मा आइतबार​, पौष २७ २०७६
देशभर आज राष्ट्रिय एकता दिवस मनाईंदैछ । नेपाल एकीकरणका महानायक अर्थात् राष्ट्र निर्माता बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको २९८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा देशभर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको हो ।. उक्त अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले छुटाछुट्टै सन्देश प्रेषित गरेर राष्ट्रवासीलाई एकता दिवसको अवसरमा श’भकामना दिएका छन् भने देशका विभिन्न भागमा स्थापित राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा नागरिकहरुले पुष्पगुच्छा अर्पण गरिरहेका छन् । त्यस्तै एकता दिवसकै अवसरमा आइतबार अर्थात् पौष २७ गते २९८ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा सलामी दिएको छ ।
देशभर आज राष्ट्रिय एकता दिवस मनाईंदैछ । नेपाल एकीकरणका महानायक अर्थात् राष्ट्र निर्माता बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको २९८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा देशभर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको हो ।.
उक्त अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले छुटाछुट्टै सन्देश प्रेषित गरेर राष्ट्रवासीलाई एकता दिवसको अवसरमा श’भकामना दिएका छन् भने देशका विभिन्न भागमा स्थापित राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा नागरिकहरुले पुष्पगुच्छा अर्पण गरिरहेका छन् । त्यस्तै एकता दिवसकै अवसरमा आइतबार अर्थात् पौष २७ गते २९८ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा सलामी दिएको छ ।
यस राष्ट्रिय एकता दिवसको पर्व अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीबाट समेत सिंहदवारको पश्चिम मूल प्रवेशद्वारमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेकी छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछिल्लो एक दशक अवधिमा वेवास्ता गरिएको यो पर्वलाई सरकारी स्तरबाट पनि धुमधामपूर्वक मनाइएको छ ।
आजभन्दा करिव तीन सय वर्ष पहिले नेपाली समाज, नेपाली मन तथा भूगोल बुझेर भावी नेपाली मात्रलाई उपयुक्त अर्ती उपदेश दिएका तत्कालीन राजा राष्ट्रिय एकताका महानायक पृथ्वीनारायण शाह आज पनि तिनै उपदेशले आम नेपालीका मनमष्तिस्कमा जीवित छन् । अर्थात् ती उपदेश आज पनि कालजयी बनेका छन् ।
वास्तमा आज संसारभर नेपाली भई हामी नेपाली भनी गर्वले लम्किरहन हामीलाई ‘नेपाल’ दिने महानायक पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको यो पुस २७ गतेको दिन आफैमा एक महत्वपूर्ण पर्वको दिन हो । यसैले पनि यो दिनलाई महापर्वका रुपमा मनाउन विभिन्न संघ–संस्थाहरुले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम तथा प्रवचन गरिरहेका छन् भने नेपाली सेनाले एकसाता अघिनै नेपाल एकीकरण अभियानका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले हिडेको पदमार्गमा राष्ट्रिय झण्डासहितको पदयात्रा सम्पन्न गरी काठमाडौं आइपुगेको थियो ।
त्यस्तै नेपाल एकीकरण हुनुपूर्व पृथ्वीनारायण शाहको राज्यका रुपमा रहेको गोरखा जिल्लामा उनको सम्मानमा विभिन्न सार्वजनिक विचार सभागोष्ठि, स्थानीय भेषभूषाको झाँकी उनको जीवनीमा आधारित प्रस्त’ती गरी मनाइरहेको बताइएको छ । विक्रम सम्वत् १७७९ पुस २७ गते तत्कालीन बाइसे चौविसे राज्यअन्तर्गतको गोरखाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको कोखबाट गोरखा दरवारमा राजपरिवारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो ।
त्यसबेला अहिलेको नेपालको भूखण्डभित्र पश्चिमतर्फ बाइसे चौबिसे, जुम्ला, डोटी, सल्यान, जाजरकोटलगायत धेरै स–साना राज्य थिए भने दक्षिणतर्फ पाल्पा तनहुँ मकवानपुरलगायत स–साना राज्य थिए ।
त्यस्तै पूर्वतर्फ ओल्लो किरात, माझ किरात, पल्लो किरात र लिम्बूवानलगायत राज्य थिए भने नेपाल भनेर चिनिने काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, भादगाउँ, पाटन, बनेपा गरी ४ वटा राज्य थिए ।
यसरी करिब एक सय राज्यमा विभक्त नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एक सूत्रमा बाँधेर विशाल नेपालको निर्माण गराए । हामी यतिवेला नेपाली हुनुमा जसरी गौरव गरिरहेका छौं त्यसको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई दिनु पर्छ । वर्षको कलिलो उमेरमा गोरखा राज्यका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अभियानमा कहिल्यै विश्राम लिएनन् । उनले गोरखालाई ठूलो राज्य बनाउने सपना लिएर नेपालको एकीकरण गरेका थिएनन् ।
बलियो नेपालको निर्माण गरेर अंग्रेजको औपनिवेश विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने उनको ध्येय रहेको पाउन सकिन्छ । त्यसवेलाको गोरखा राज्यको भू–भाग अन्य राज्यको तुलनामा आर्थिक भौगोलिक रुपमा कमजोर थियो । जनसंख्या पनि थोरै थियो, तर नेपाल एकीकरण गर्ने सपना नेपालको भू–भागभित्र रहेका अन्य राज्यका राजाले कहिल्यै देखेनन् पृथ्वीनारायण शाहले मात्र देखे । यो सपना उनले किन देखे, भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
किनभने अन्य राज्यका राजा यूवराजहरु मोजमस्तीमा थिए, जनताको सुख दुःखमा ध्यान दिंदैनथे । तर, गोरखाका राजा नरभूपाल शाहले आफ्नो छोरा पृथ्वीनारायण शाहलाई सानै उमेरदेखि उचित शिक्षादिक्षा दिए । देश विदेशबाट गुरु झिकाएर पृथ्वी नारायण शाहलाई पढाएका थिए । सैन्य, कुटनीति, कलाकौशल तथा सूचना संकलनमा उनलाई पोख्त बनाएका थिए । ‘न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने उखान राम शाहको पालादेखि नै चलिरहेको थियो । एकातिर युवा अवस्थामै हरेक ज्ञानबाट विज्ञ बन्दै गएका पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाको राजकाज चलाउने मौका पाएका थिए । अर्कोतिर पृथ्वीनारायण शाह सैन्य संरचनाका विज्ञ मात्रै थिएनन्, आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक विज्ञ पनि थिए । उनको राज्यकालमा राजा होस् त गोरखाको जस्तो भन्ने छाप परेको थियो । यही कारणले गोरखाको सानो राज्यले आजको विशाल नेपाल निर्माण गरेको हो ।
त्यसैले हरेक नेपालीले पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकीकरणका महानायकको रुपमा सम्झिदै आइरहेका छन् । विश्वमा एक पुरानो देशका रुपमा नेपालको नाम पनि आउने गर्दछ । त्यसैले आजको यस दिन हरेक नेपालीहरुको गौरवमय दिन हो । पुस २७ गतेले हामीलाई पृथ्वीनारायण शाह दियो, पृथ्वी नारायण शाहले हामीलाई विशाल एकीकृत नेपाल दिए । हामी नेपालीका निमित्त आजको दिन अविश्मरणीय दिन हो ।
जसरी विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आज जर्मनीले विस्मार्कप्रति गर्व गर्दछन्, अमेरिकीहरुले जर्जवासिंट्नप्रति गर्व गर्दछन् तथा भारतीयहरुले महात्मागान्धीप्रति गर्व गर्दछन् यस्तै कयौं देशका नागरिकले आफ्नो मुलुक निर्माण गर्ने महानायकप्रति गर्व गर्दछन् त्यसरी नै हामीले बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहप्रति गर्व गर्नुपर्छ ।
आजभन्दा ३ सय वर्ष अगाडि राष्ट्र निर्माणजस्तो महान अभियान थालनी गर्न कम चुनौतीपूर्ण थिएन् । तरपनि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अभियान पुरा गरे । अर्कोतिर आफू गोरखा राज्यको भएपनि उनले राष्ट्र एकीकरणपश्चात आफ्नो राज्यको नाम राख्नुभन्दा देशको नाम नेपाल राखेबाट उनको महाअभियान निःस्वार्थ रहेको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र एकीकरणको महाअभियानका क्रममा भएका युद्धका क्रममा भएका सानातिना स्वाभाविक पक्षलाई खोतलेर पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्नेहरुले पनि आजको दिन उनको स्मरण गर्नैपर्छ । जसले सिर्जना गरेको भूमिमा टेकेर उनकै विरोध गर्नु कृतघ्नाताको पराकाष्ठा हो । नेपालको भूगोल कहिले निकै ठूलो र कहिले निकै सानो रहेको इतिहासले देखाउँछ । हाल कायम रहेको भूगोल पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो एकीकरण प्रतिफल हो । हामीले अहिले जुन भूगोललाई नेपाल मानेका छौं यसको निर्माण पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको हो, भन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माताको सम्मान दिन कुनै कन्जुस्याईं गर्नु हुन्न । उनको सम्मानमा नझुक्ने तर राष्ट्रवादको कुरा गर्नु कृतघ्नता हो ।
यतिमात्रै होइन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह निकै दुर्दर्शी थिए । उनी जति कुशल सैन्यविज्ञ थिए, त्यतिकै कुशल राजनीतिज्ञ, अर्थविज्ञ् र परराष्ट्रविज्ञ पनि थिए भन्ने कुरा उनको दिव्योपदेशले छर्लंग पार्छ । ५० वर्ष उमेर पुगेपछि उनले आफ्नो जीवन अब अन्तिमतिर आइपुगेको छ भन्ने संकेत पाएका थिए । त्यसपछि उनी त्रिशुली र तादीको संगमस्थल देवघाटमा बसेर मुलुकको भविश्यबारे चिन्ता गर्न थाले, त्यही चिन्तनको उपहार हो दिव्योपदेश । अनि आफ्ना जीवनका अधुरा काम उत्तराधिकारीमार्फत होस् भन्ने चाहनास्वरुप उनले केही टिपोट गराएका थिए, जसलाई दिव्योपदेश भनिन्छ । दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले स्पष्ट रुपमा भनेका छन्, ‘यो मेरो साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन् भनेबाट पनि त्यो महाअभियान निकै चुनौतीपूर्ण रहेको पुष्टि गर्दछ ।
त्यस्तै दिव्योपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन्, ‘नेपाल भनेको दुई ढुंंगाबीचको तरुल हो, लोकसम्मतिका आधारमा अघि बढ्न सकिएन भने मुलुक नरहन सक्छ ।’ उनले नेपाललाई अरु उपमा नदिएर दुई ढुंगा बीचको तरुल भन्ने उपमा किन दिए त ? ढुंगा भनेको स्थायी हो, नियमित मलजल र माटो पुर्याउन सकिएन भने त्यहाँ उम्रिने तरुल स्थायी रहँदैन । मलजल नपाए मर्छ त्यसैले लोकसम्मतिका आधारमा अघि बढेमात्रै मुलुकले स्थायित्व पाउँछ भन्ने भनाई उनको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘प्रजा मोटा भया दरवार बलियो हुन्छ लोकसम्मतिका आधारमा मुलुक चलाउनुपर्छ’ भन्ने कुरा दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका छन् । यसको तात्पर्य के हो भने राज्यले सधैं जनताको भलो चिताउने काम गर्नुपर्छ । जसबाट जनता सधैं खुसी र सुखी हुन्छन् । त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन्, ‘म विराज बखतीलाई काजी बनाउन चाहन्थे, तर दुनियासँग बुझ्दा काल’ पाण्डे काजी बनोस् भन्ने चाहना रहेको पाएँ, त्यसैले कालु पाण्डेलाई काजी बनाएँ । जनता जोसँग राजी हुन्छन् उसैलाई काजी बनाउनु ।’ पृथ्वीनारायण शाहको पालमा अहिलेको जस्तो मतदान गर्ने प्रणाली थिएन । जनता कहाँ प्रत्यक्ष पुगेर राय लिनु निकै कठिन काम थियो, तरपनि उनले राज्यको कार्यकारी प्रमुख काजी नियुक्ति गर्दा घर–घरमा दूतहरु पठाई राय लिने लोकतान्त्रिक पद्दति अवलम्वन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै जनताको सहभागिता बेगर राज्य सञ्चालन गरियो भने मुलुकलाई अप्ठेरो पर्ने कुरा तत्कालीन अवस्थामै पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् ।
त्यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा अर्थ नीति कस्तो हुनुर्ने भन्ने मार्गचित्र दिंदै भनेका छन्, ‘विदेशी व्यापारीलाई मुलुकमा प्रवेश गर्न नदिनु, विदेशी सामान प्रयोग नगर्नु, महंगो भएपनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्नु यसो गर्दा स्वदेशी पैसा विदेश जाँदैन ।’
‘उत्तरको बादशाह र दक्षिणको सम्राट धेरै शक्तिशाली छन् यिनीहरुसँग मित्रवत् व्यवहार गरेर काम गर्नु सन्तुलन बिगार्न नदिनु जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु ।’ जस्ता उनका उपदेश कुटनीतिक र रणनीतिकरुपमा आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । उनै महापूरुष तथा नेपाल राष्ट्रका एकीकरणका महानायक ठिक पुस २७ गतेका दिन आजभन्दा करिव तीनसय वर्षपहिले यस धर्तीमा पाइला टेकेर १८ ३१ साल माघ १ गते भौतिक रुपमा विदा भएका थिए । तर हामी आम नेपालीलाई सिंगो एकीकृत नेपाल दिएका उनी र उनका दिव्योपदेश उपदेश आज पनि जीवन्त छन् ।
(लेखक ः अधिवक्ता हुन )